Acrylic Knitting Yarn / Acrylic Yarn Skein / Hand Knitting Knit
100% Alates Knitting Yarn, Alates iyo Polyester isku dhafka tolida yar, 100% Politster Knitting Yarn, Fancy Knitting Yarn, PP Yarn
Dharka tolida guud ahaan waxaa loo isticmaalaa isku duubista funaanadaha, surweellada, dharka jaakadaha, jaakadaha, koofiyadaha gacmo gashiga iyo gogosha, marka lagu daro diirimaadka, waxay sidoo kale leedahay saameyn qurxinta. MH waxay leedahay dhammaan noocyada yantiga yar-yar ee dhumucda kala duwan, midabbada, baakadaha, waxay buuxin karaan baahiyaha suuqa kala duwan.
100% Xirmooyinka Xiinka Yarn
100% acrylic knitting yarn qeexitaannada caadiga ah waxay leeyihiin 5S / 3, 8S / 6, 16S / 2, 30/2 * 8N, 19S / 3, 20S / 3, 9S / 3
Waxay leedahay faa'iidooyinka jilicsanaanta, bulkinnimada, midabaynta fudud, midab dhalaalaya, iska caabin fudud, ka hortagga bakteeriyada iyo caabbinta cayayaanka, oo si ballaaran looga isticmaalo dharka, qurxinta, warshadaha.
Kareemka loo yaqaan 'acrylic and Polyester' oo isku dhafan jilbaha Yarn
acrylic iyo polyester isku-darka jilista yarn tilmaamaha guud waxay leeyihiin 10S / 2,10 / 90,19S / 3,70 / 30,9S / 4,60 / 40,16S / 3,10 / 90,12S / 2,70 / 30,16S / 2,70 / 30.
Waxay leedahay faa'iidooyinka jilicsanaanta, bulkinnimada, midabaynta sahlan, midab dhalaalaya, caabbinta iftiinka, bakteeriyada ka hortagga, iyo caabbinta cayayaanka. Waxa intaa u dheer sii wadidda faa'iidooyinka biririfta siligga biririfta .it sidoo kale ma fududa in wax lagu buuxiyo iyada oo kharash yar.
Boqolkiiba 100 Polyester Knitting Yarn
100% polyester knitting yarn qeexitaannada caadiga ah waxay leeyihiin 8S / 3,16S / 3,16S / 3 iyo 10/90.
Waxay leedahay faa'iidooyinka qiime jaban, xoog sare, iska caabin aad u sareeya, oo badanaa lagu isticmaalo rooga.
Fannaanad Xiiso Leh Yarn
dharka jilicsan ee jilicsan ayaa ka sameysan fiilooyin kala duwan oo isku dhafan, waxay leedahay qaab kala duwan, waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada moodada dharka ah, oo badanaa lagu isticmaalo warshadaha dharka iyo DIY.